हामीलाई धेरै सोधिने प्रश्न — बच्चा भएन भने बुढेसकालमा कसले हेर्छ? बच्चा हुँदैमा उनीहरुले पछि हेर्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? उनीहरुका आफ्नै इच्छा, आकांक्षा हुनेछन। उनीहरुको जीवनले कता लग्ला — हामी संगै बस्न मिल्छ भन्ने पनि छैन, बस्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। अविभावकहरुको काम बच्चा हुर्काउने र सक्षम बनाएर आफ्नो बाटो लाग्न मद्दत गर्ने हो। थाहा छ, यो विचार आत्मसात गर्न नेपाली समाजमा धेरैलाई गाह्रो पर्छ।
मुख्य कुरा बच्चा नभएर हाम्रो उत्पादकता बढ्यो भन्ने होइन। बच्चा भएका साथीहरु हामीभन्दा निक्कै बढी सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। कुरा हाम्रो जीवन आफ्नै इच्छाले बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको हो र कुरा हो संवेदनशीलताको पनि। मलाई मातृत्वको बारे भाषण दिने धेरै जसो शुभचिन्तकहरुलाई यो थाहा हुन्न कि मेरो स्वास्थ्य कस्तो छ, म गर्भधारण गर्न सक्षम पनि छु कि छैन। विवाह अघि नै बच्चा नपाउने निर्णय गरेकोले मैले मेरो प्रजनन क्षमताको बारे धेरै सोच्नु परेको छैन। तर दशमा एक जना भन्दा बढी महिला जसले चाहेर पनि गर्भधारण गर्न संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ वा एकमा पाँच महिला जसको नचाहँदै पनि गर्भपात हुन्छ, उनीहरुको लागि प्रजनन स्वास्थ्यका कुरा सैद्धान्तिक व्यायाम मात्र हुँदैन। मैले धेरै साथीहरुको संघर्ष नजीकैबाट देखेको छुँ। मातृत्वको गुणगान गर्न अघि एक चोटि सोच्नुस कि तपाईंले कतै आलो घाउमा नून खुर्सानी छर्ने काम त गरिरहनु भएको छैन?
म आफ्नो जीवन आफ्नो खुशीले बाँच्न चाहन्छु र त्यसमा पुरा साथ दिने जीवनसाथी पाएकी छुँ। जीवन साथी रोज्ने, विवाह गर्ने, बच्चा पाउने यी सबै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा हुन्। यदि हाम्रो आफ्नो जीवनको लागि हामीले गरेको निर्णय तपाईंलाई पच्दैन भने हाजमोला खानुस — हामीलाई हाम्रो जीवन बाँच्न दिनुस्।